Misy vokany azo tsapain-tanana ve ilay fanafody moka ultrasonika?
Misy vokany azo tsapain-tanana ny famonoana moka ultrasonic. Ilay moka ultrasonika dia mahatratra ny vokatry ny famoahana ireo moka vavy manaikitra amin'ny alàlan'ny fakana tahaka ny fahavalon'ny fahavalon'ny moka voajanahary toy ny capte na moka lahy. Fitsipika fampiasana: 1. Araka ny st maharitra ...
Ny fotokevitra, ny fepetra takiana amin'ny fametrahana ary ny olana mahazatra an'ny ultrason mouse repeller
Ultrasonic mouse repeller dia fitaovana iray izay mampiasa famolavolana teknolojia elektronika matihanina sy fikarohana nandritra ny taona maro momba ny biby mpikiky ao amin'ny fiarahamonina siantifika mba hamoronana fitaovana iray izay afaka miteraka onja ultrasonic 20kHz-55kHz. Ny onja ultrasonika vokarin'ny fitaovana dia afaka manentana sy mahomby ...
Miaro ny tranonao amin'ny bibikely isan-karazany ny fanafody famonoana bibikely ultrasonic
Ireo mpitsentsitra bibikely ultrasonic dia mamoaka feo matetika be loatra, ary ny feo novokarina dia nanondro fa nihena ny fisian'ny bibikely ao an-trano, saingy amin'ny alàlan'ny fanombanana ny laboratoara dia tsy maintsy voaporofon'ny olona rehetra tsara indrindra ireo fitaovana ireo. Ireo mpandroaka bibikely ultrasonic ireo dia manana ...
Malalaka amin'ny tontolo iainana ve ny fampiasana mpamono moka?
Ny mpamono moka dia mampiasa ny fahatsapana ny moka amin'ny halavan'ny halavany manokana, manintona ny moka amin'ny alàlan'ny gazy karbonika photocatalytic, ary mamono avy hatrany ny moka amin'ny alàlan'ny tariby herinaratra avo lenta avy any ivelany. Tsy misy setroka, tsy misy tsirony ary ambany fanjifana angovo. Io no betsaka ...
Nofoanana ny angano fanaraha-maso pest amin'ny fahavaratra
Ny moka, ny lalitra, ny fanenitra ary ny bibikely fahita amin'ny fahavaratra dia mety te hanimba ny fety amin'ny fahavaratra-manelingelina ny vahininao ary manakana azy ireo tsy hankafy ny tontolo ivelany. Amin'ny fahavaratra, hafana tokoa ny hetsika fialamboly any ivelany, ary efa nandre torohevitra DIY maro ny tompony mba hialana amin'ny bibikely fahavaratra. ...
Ahoana ny famongorana ny moka aorian'ny tondra-drano?
Ny fisian'ny moka dia hisy fiatraikany lehibe amin'ny kalitaon'ny fiainana ny olona. Tsy izay ihany fa hitondra fahavoazana amin'ny aretina isan-karazany tsy ampoizina koa izy ireo. Noho izany, ny fisorohana sy ny famongorana ny moka dia tena zava-dehibe. Androany, handray tranga hanazavana aminao aho, f ...
Mahomby ve ny famonoana moka ao an-trano fandriana?
Nandritra ny taona maro, teny an-dàlana hisorohana sy hifehezana ny moka, ny ankamaroan'ny olona dia tsy manantena afa-tsy ny vokatra azo avy amin'ny moka afaka mampihena ny fiparitahan'ny moka amin'ny vatan'olombelona. Betsaka ny karazana vokatra famonoana moka azo eny an-tsena, amin'ny ankapobeny misy ny moka, moka ...
Olana mifandraika amin'ny vokatra
1. Inona ny fitsipiky ny fiara fitarafana ultrasound entin'ny vokatra hamoahana kalalao sy totozy ary hanala ny bibikely? Valiny: Voaporofo ny fitsapana fa ny ultrasound dia mety hiteraka tsy fahazoana aina amin'ny fihainoana sy ny rafi-pitabatabana amin'ny ankamaroan'ny bibikely, ka manery azy ireo hanalavitra ny feon'ity p ...
Inona no atao hoe fihinanam-biby?
Betsaka ny olona manana voalavo ao an-tranony no maniry hanala ireo bibikely ireo. Ny voalavo dia afaka mitondra aretina, ary tsara kokoa ho an'ny olombelona ny miaina ao anaty trano tsy misy voalavo, tsy manilika voalavo biby. Toa masiaka ny famandrihana ny totozy amin'ny famonoana azy ireo, ary misy fomba maro hanalana azy ireo nefa tsy tonga hatrany amin'ny ...
Adiresy: 1ère Floor, Building B, Zone B, Canbo Industrial Zone, No. 22, Zone Industrial Industrial faharoa, Xia Village, Gongming Street, Distrikan'i Guangming New, Shenzhen
© Copyright - 2010-2022: Voatahiry ny Zo rehetra. Shenzhen Jinjiang Hi-Tech Co., Ltd.